प्रकाशित मिति: May 20,2019
६ जेष्ठ, सोमवार
उदयपुर – स्वास्थ्यका लागि खेलकुद राष्ट्रका लागि खेलकुद भन्ने मुल नाराका साथ कटारीको वडा नं. २ स्थित गुराँसमा प्रथम मेयर तेक्वान्दो प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । ९ टिमहरुको सहभागीतामा भएको खेल जेष्ठ ४ र ५ गते भएको गुराँस तेक्वान्दो डोजाङका प्रशिक्षक शंकर सिंहले बताए ।
प्रदेश सांसद कला घलेको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न प्रतियोगितामा कटारी नगरपालिकाले ३ लाखको बजेटमा सम्पन्न भएको हो । कटारी २ गराँसमा अवस्थित कवर्डहललाई प्रदेश स्तरीय कवर्डहल बनाउनलाई आपूmले पहल गर्ने सांसद घलेले बताउनु भयो । “आपूm खेल प्रेमी भएको र बाल्यकालमा तेक्वान्दोकै खेलाडी भएकोले खेलकुदमा सक्दो परिवर्तन गर्ने छु” –कटारी नपाका २ नं. वडा अध्यक्ष प्रेम थापाले बताए ।
उदयपुरका कटारी नगरपालिका, त्रियुगा नगरपालिका, बेलका नगरपालिका, चौदण्डी नगरपालिका र आयोजक गुराँस तेक्वान्दो डोजाङ गरी ५ टिमको सहभागीता थियो । त्यस्तै छिमेकी जिल्ला सिरहा गोलबजार नगरपाकिलाका, धनगढी नगरपालिका, लहान नगरपालिका गरी ३ वटा समूह सहभागी थिए । सुनसरी जिल्ला ईटहरी उप महानगरपालिकाबाट १ समूह सहभागी भएका थिए ।
तौल अनुसार पुरुष र महिलाको छुटटा छुटटै खेल प्रदर्शन भएको थियो । प्रथम, दोश्रो र तेश्रो खेलाडीलाई शिल्ड मेडल प्रमाण पत्र दिएर सम्मान गरिएको थियो । उपस्थित अतिथिहरुलाई आयोजकले मायाको चिनो प्रदान गरेर सम्मान गरेको थियो ।